Toriteny Alahady 25 Martsa 2018 : Sampankazo – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Diso fanantenana ny mpianatra satria natoky loatra an’i Jesoa sy ny heriny izy ireo indrindra amin’ny maha-Andriamanitra Azy. Ka ny tao an-tsainy dia tsy misy Andriamanitra mety ho faty izany satria tsy fantany hoe iza tokoa moa ity mpanjaka ity. Ary rehefa nosamborina i Jesoa dia lasa nandositra daholo ireo mpianany fa tsy nisy nahasahy nijanona teo na iray aza noho ny fahadisoam-panantenana amin’ny fiheverana an’Andriamanitra. Ny mpianatra malalan’i Jesoa sy ny reniny no tonga teo am-pototry ny hazofijaliana fa tsy ny Apôstôly izay tiany sy nofidiany manokana.
Toy izay ihany koa isika : lavintsika marina ve ny satana ? lavintsika ve ny fireharehany ? inoantsika tokoa ve Andriamanitra Ray mahefa ny zavatra rehetra ? sa faly manome tsiny an’i Piera fotsiny noho izy nanda nilaza ho tsy nahafantatra an’i Jesoa ?
Ny tsy nampitovy an’i Piera sy i Jodasy dia : i Piera nanenina rehefa nahatsapa hoe namadika an’i Jesoa ka mbola nitodika tamin’Andriamanitra indray ; fa i Jodasy kosa diso fanantenana tamin’ny nataony ka vao maika tsy niverina tamin’Andriamanitra intsony.
Inona marina no tena nahafaty an’i Jesoa ?
Fahafatesana manala baraka no nanjo an’i Jesoa ary fahafatesana ratsy indrindra tamin’izany fotoana izany dia ny famantsihana amin’ny hazofijaliana (fomba Rômanina satria zanatany Rômana ny Jody tamin’izany). Antony telo ary no namonoana sy nahafaty an’i Jesoa Kristy :
Nilaza ny tenany tamin’ny olona izay nanontany Azy i Jesoa fa Andriamanitra Izy nefa fahotana mahafaty amin’izy ireo ny filazana fa misy Andriamanitra hafa ankoatra an’Andriamanitra Ray ka mendrika ho vonoina izay mitonon-tena ho Andriamanitra satria miteny ratsy an’Andriamanitra. Tezitra i Kaïfa izay lehiben’ny mpisorona tamin’izany nony nandre izany tenin’i Jesoa izany.
Lasan’i Jesoa daholo ny olona nony nahita ny fahagagana nataony sy naheno ny fampianarany izay nampitolagaga azy ireo dia lasa very asa ireo mpisorona ka velom-pialonana.
Ny mpanjakan’ny Jody tamin’izany dia i Sezara, nefa rehefa nanontaniana i Jesoa hoe « Ianao ve no mpanjakan’ny Jody ? » dia nanaiky Izy ; izany hoe nitsangan-kanohitra ny fanjakan’i Sezara Izy izany ka nataon’ny olona hoe mendrika hovonoina.
Nanota tamin’Andriamanitra avokoa isika olombelona ka tsy maintsy manonitra izany isika. Ka i Kristy nandatsaka ny rany teo amin’ny Hazofijaliana no nanao izany teo amin’ny toerantsika. Ka tokony hazava tsara amin’ny saintsika fa tsy maty ho an’ny demony i Kristy fa maty ho an’Andriamanitra mba hanonitra ny fahotantsika Aminy.
Efa nalan’i Jesoa teo ami’ny Hazofijaliana azy ny fahotantsika rehetra, ka ny fandraisantsika izany fahasoavana izany ary dia mamporisika antsika hanana fo vaovao, ho fitsanganan-ko velona vaovao miaraka amin’i Jesoa Kristy ny fiainantsika indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny Paka izao, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny ratsy.